I-Bistro I-Ubon yi-bistro yase-Thai ebekwe embindini wesixeko. Ijonga ngaphaya kwesitalato iFahad Al salim, isitrato esihlonitshwayo kwezorhwebo emva phaya. Inkqubo yendawo yale bistro ifuna uyilo olusebenzayo lwayo yonke ikhitshi, yokugcina, kunye neendawo zangasese; ukuvumela indawo yokutyela ebanzi. Ukuze oku kufezekiswe, ingaphakathi lisebenza apho linokudityaniswa nezinto ezikhoyo ngendlela efanelekileyo.
Isibane I-Tako (i-octopus ngesiJapan) sisibane setafile esiphefumlelwe yi-cuisine yaseSpain. Iziseko ezibini zikhumbuza iipleyiti zeplanga apho "ipippo la la gallega" ikhonzwa khona, ngelixa ubume bayo kunye ne-elastic band ikhupha i-bento, ibhokisi yemveli yesiko laseJapan. Amalungu alo ahlanganiswe ngaphandle kwezikrufu, ezenza kube lula ukuzidibanisa. Ukupakishwa iziqwenga kunciphisa ukupakisha kunye nokugcina iindleko. Idibeneyo ye-polypropene yesibane eguqukayo ifihlwe emva kwe-band elastic. Iibhloko ezigxilwe kwisiseko kunye neziqwenga eziphezulu zivumela ukuhamba komoya okufanelekileyo ukuze kuthintelwe ukutshisa.
Isongo Zininzi iintlobo ngeentlobo zeesongo kunye neebhanti: abaqulunqi, igolide, iplasitiki, ixabiso eliphantsi kwaye elibizayo… kodwa zintle njengokuba zinjalo, zonke zihlala zilula kwaye zisongo kuphela. UFred yenye into engakumbi. Ezi cuffs ngokulula kwazo ukuvuselela isidima samaxesha akudala, seyizinto zangoku. Banokunxitywa kwizandla ezingenanto nakwibhulawuthi yesilika okanye i sweatshi emnyama, kwaye baya kuhlala bongeze ukubonwa kweklasi kulowo ubanxibileyo. Ezi zibiyeli zahlukile kuba ziza njengesibini. Kulula kakhulu okwenza ukuba ukunxiba kube kuhle. Ngokuzinxiba, kuya kuphinda kuqatshelwe!
Isitulo Sokuphumla Umshini We-Tea Ozenzekelayo Ngokupheleleyo Indawo I-Bistro Isibane Isongo